JIOLAHY MPANAFIKA « CASH POINT » : Sarona teo am-pikononkononana fandrobana izy 05 lahy
Mbola teo am-pikononkonona-na fanafihana mitam-piadiana ireo jiolahy mpandroba no tra-tehaky ny Polisy, ny alarobia faha 12 febroary 2020 lasa teo. 14 février 2020
Lehilahy miisa 05 no fantatra fa voasambotry ny avy ao amin’ny sampan-draharahan’ny Polisim-pirenena misahana ny ady heloka bevava sakelika fahaefatra sy ny Polisy avy etsy amin’ny kaomisaria Sabotsy Namehana. Noho ireo trangana fanafihana mitam-piadiana maromaro nifanesy teto an-drenivohitra sy ny manodidina dia nanao fikarohana sy fanangonam-baovao ny Polisy.
Nahitam-bokany tokoa izany satria ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 09 ora maraina no naharay vaovao mahakasika ny fisiana andian-jiolahy nikononkonona fanafihana teny Sabotsy Namehana izy ireo. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny polisy, ary noho ny paikady napetraka dia voasambotra tao amina toeram-pisotroana iray eny an-toerana ireo olon-dratsy miisa 05, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany antoandro na dia nanohitra sy nikasa ny handositra aza. Nandritra ny fisavana no nahitana basy poleta 01 sy « Big Boss » 01 teny amin’ireto olon-dratsy.
Mpaka ny vola vidina fahana an’ny orinasam-pifandraisana miasa eny amin’ny faritra Sabotsy Namehana iny kosa no saika norobain’izy ireo tamin’ity fotoana ity. Niaiky ihany koa ireto farany fa anisany namaky tranom-barotra sy « Cash point » eto an-drenivohitra, anisan’ izany ny fanafihana mitam-piadiana tetsy 67ha ny alatsinainy faha 10 febroary teo saingy nandamoka izany satria nalaky tonga ny Polisy avy ao amin’ny CSP7. Etsy ankilany, mbola tompon’antoka tamin’ny fanafihana mitam-basy tao amina tokantrano iray tetsy Faravohitra, ny alin’ny 31 janoary 2020 lasa teo, ka nahaverezana vola sy entana maro mitentina enina tapitrisa ariary mahery. Mitohy hatrany ny fikarohana mahakasika ny toerana rehetra nanaovan’izy ireo asa ratsy. Hatolotra ny Fitsarana izy dimy lahy ireto aorian’ny famotorana.